विदेश – NepalNewsTime
Nepal News Time	April 13, 2018
पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज सरिफले आजीवन निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने भएकाा छन्। पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले उनलाई जीवनभरी निर्वाचन लड्न अयोग्य हुने फैसला शुक्रबार सुनाएको हो। पाकिस्तानी संविधानको धारा ६२ अनुसार उनलाई त्यस्तो फैसला सुनाइएको अदालतले स्पष्ट पारेको स्थानीय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन्। यो फैसलासँगै पूर्वप्रधानमन्त्री सरिफको प्रत्यक्ष राजनीतिक यात्रा अन्त्य भएको छ। यस विषयमा सरिफको प्रतिक्रिया […]
ट्रम्पसँग वार्ता गर्ने विषयमा सीसँग कूटनीतिक ‘टिप्स’ लिन किमको चीन भ्रमण
Nepal News Time	March 29, 2018
उत्तर कोरियाली सर्वोच्च नेता किम जोङ उन यसैसाता गोप्य रुपमा चीन भ्रमणमा पुगे। उनले बेइजिङ छोडेपछि मात्रै दुवै देशले यो भ्रमणको पुष्टि गरे। कोरियाली प्रायद्वीपमा तनाव कम हुँदै गर्दा किम किन चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ भेट् पुगे भन्ने विषयमा अनेक अड्कलबाजी भइरहेका छन्। दक्षिण कोरियाका पूर्व विदेशमन्त्री युन ब्युङ सेले भने ‘शिखरवार्ता कूटनीति’ मा किमको […]
रेल चढेर किम जोङ–उन चीन गएको पुष्टि, महत्वपूर्ण वार्ता भएको दाबी
Nepal News Time	March 28, 2018
उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ–उन एक विशेष रेल चढेर चीन भ्रमणमा गएको उत्तर कोरिया र चीनले पुष्टि गरेका छन् । केही दिनदेखि नेता किम विशेष रेल मार्फत बेइजिङ गएको खबर आएका थिए तर त्यसको पुष्टि हुन सकेको थिएन । यो हप्ता किमका बुवाले प्रयोग गरेकै रेलमा उच्च अधिकारी बेइजिङ पुगेको खबर सार्वजनिक भएको थियो र […]
रातारात करोडपति बने युवा, खातामा आयो ५ करोड ५५ लाख
भारत उत्तर प्रदेशका बाराबंकीमा एक छात्र त्यसबेला हैरान भए जब उनको खातामा अचानक ५ करोड ५५ लाख ५५ हजार ५ सय ५५ रुपैयाँ आयो । सेन्ट्रल एकेडेमीमा इन्टर लेभलमा पढिररहेका केशव शर्माको एकाउन्ट स्टेट बैंक अफ इन्डियाको सट्टी बजार शाखामा रहेको छ । केशवका पिता नरेन्द्र शर्मालाई १६ मार्चका दिन मोबाइलमा अचानक बैंकबाट एक एसएमएस आयो […]
के मोदी सरकार ढल्ला? यस्तो छ अवस्था
मोदी सरकार विरुद्ध संसद्‌मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने भएको छ। तेलगु देशम पार्टी (टिडिपी) र आइएसआर कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न लागेका हुन्। आइएसआर कांग्रेसका सांसद वाइवी सुब्बा रेड्डीले सोमबारको संसद्‌मा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न लोकसभा सचिवालयमा निवेदन दर्ता गराएका छन्। आन्द्र प्रदेशका मुख्यमन्त्री चन्द्रबाबु नायडूको पार्टी टिडिपीले पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन लागेको छ। […]
रुसी राष्ट्रपति पुटिन भारी मतान्तरसहित चौथो कार्यकालका लागि निर्वाचित
रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन चौथो कार्यकालका लागि विजयी भएका छन्। भारी मतान्तरसहित पुटिन आउँदो ६ वर्षका लागि निर्वाचित भएका हुन्। केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले मतगणना करिव अन्तिम चरणमा पुग्दा पुटिनलाई ७६ प्रतिशत मत प्राप्त भएको जनाएको छ। उनी १९९९ देखि रुसको सत्ता सम्हाल्दै आएका छन्। अघिल्लो कार्यकालको भन्दा उनले १२ प्रतिशत मत बढाएका हुन्। पुटिनका निकटतम […]
१ सय ८० देशमा के गर्दैछ अमेरिकी सेना ?
गएको अक्टोबरमा नाइजरमा एउटा आक्रमणमा चार जना अमेरिकी सैनिक मारिए । अफ्रिकी देश माली र नाइजरको सीमामा एक अपरेशनमा रहेका बेला अमेरिकी सेनामाथि आक्रमण भएको थियो । अमेरिकाका लागि यो ठूलै झट्का थियो । पश्चिम अफ्रिकाको यो यस्तो क्षेत्र हो जहाँ कसैलाई थाहा थिएन कि अमेरिकी सेनाको मिसन चलिरहेको छ । विश्वकै शक्तिशाली देश मानिने […]
आफ्नो पति जेलमा रहँदा बीर्यदानबाट प्यालेस्टिनीहरूले यसरी बच्चा जन्माउँछन्
Nepal News Time	March 17, 2018
इजरायलको जेलमा हजारौं प्यालेस्टिनी नागरिक छन् । लामो जेल जीवनको सजाय भोगिरहेका प्यालेस्टिनीहरू आफ्नी पत्नी गर्भवती भएको र सन्तान जन्माएको खबर जेलमै सुनेर दंग परिरहेका हुन्छन् । पति जेलमा रहेकै समयमा कसरी घरमा गर्भवती हुन्छन् पत्नी ? जिज्ञासा जाग्नु स्वाभाविक पनि हो । पति जेलमा रहेका महिलाले आफ्नै पतिको बीर्यबाट गर्भधारण गरेका हुन्छन् । इजरायली […]
सार्वजनिक रूपमा सपथ लिने पहिलो चिनियाँ राष्ट्रपति बने सी
‘म संविधानले प्रदत्त अधिकार र कानुनी दायित्वहरू पूरा गर्दै जनगणतन्त्र चीन (पीअारसी)को संविधानको रक्षा गर्न पूर्ण प्रतिवद्ध छु…..’ शनिबार मात्र चीनको राष्ट्रपतिमा पुनः निर्वाचित भएसँगै सी जिङ पिङले सार्वजनिक रूपमा सपथ लिए। जनगणतन्त्र चीनको संविधान रक्षाका लागि उनले विधिवत रूपमा सपथ लिए। चीनको इतिहासमा सार्वजनिक रूपमा संविधानको रक्षाका लागि कुनै राष्ट्रपतिले कार्यभार समाल्नु अगाडि सपथ […]
रुसद्वारा बदलास्वरुप २३ बेलायती कूटनीतिक कर्मचारी देशनिकाला
बेलायतले आफ्ना कूटनीतिक कर्मचारीलाई देशनिकाला गरेको बदलास्वरुप रुसले पनि २३ बेलायती कूटनीतिज्ञलाई देश छोड्न आदेश दिने बताएको छ। रुसले ब्रिटिश काउन्सिल पनि बन्द गर्ने बताएको छ। रुसी विदेशमन्त्रालयले देशनिकालाको निर्णय लिएको हो। यसअघि रुसी विदेशमन्त्री सेर्गेइ लाभ्रोभलाई मस्कोस्थित बेलायती राजदूतलाई बोलाएका थिए। एक पूर्व दोहोरो जासुस र उनकी छोरीमाथि बेलायतमा भएको रासायनिक आक्रमणपछि दुई देशबीचको […]